Botco.ai: Ngwọta Azụmaahịa Nkwado Nkwado HIPAA | Martech Zone
Botco.ai's HIPAA-Kwadoro na mkparịta ụka na-aga n'ihu na-aga n'ihu, na-agbakwunye Contextual Chat Marketing na dashboard nyocha dị elu.
Akwukwo Nkata Akwukwo Nso na-enyere ndị ahịa aka ibido mkparịta ụka ahaziri iche na atụmanya na ndị ahịa dabere na otu ha siri bịa ileta websaịtị nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe mgbasa ozi.
The ọhụrụ nchịkọta dashboard na-enye nghọta miri emi banyere ajụjụ na omume ndị ọbịa.
Tinyere njikọta Botco.ai na email, CRM, na sistemụ azụmaahịa ndị ọzọ, Azụmahịa Nkata Azụmaahịa na-eweta ọkwa nke ịhazi ahịa nke mkparịta ụka bụ nke a na-enwetụbeghị ụdị ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Kedu ihe nnabata HIPAA pụtara?
HIPAA na-anọchi anya Iwu Ahụike Ahụike America nke 1996 na Iwu Ajụjụ nke XNUMX, ma na-edebe usoro, iwu, na usoro nke ndị dọkịta, ụlọ ọgwụ ga-agbaso, ma metụtara teknụzụ ha jiri. HIPAA na-enyere aka hụ na ndekọ ahụike, ụgwọ ịgba ụgwọ ahụike, na ndekọ ahụike na-agbaso ụkpụrụ ụfọdụ na-agbanwe agbanwe n'ihe gbasara akwụkwọ, njikwa, na nzuzo. Teknụzụ na-ekwenye na HIPAA nwere teknụzụ, nke anụ ahụ, na nhazi iji hụ na edobe data na nzuzo, ịnweta naanị ndị nwere ikikere, na-enyocha ya, na-echekwa ndekọ ndekọ nke ọma, a zụrụ ndị ọrụ nke ọma, na usoro a na-agbaso ma ọ bụrụ na ha emebi iwu ọ bụla nke ozi nlekọta ahụike ha.
HIPAA Journal - HIPAA Nkwado Nyocha
Botco.ai ngwaahịa gunyere:
Ntanetị weebụ - tinye nke ọma tinye webchat na webụsaịtị gị ugbu a iji nye ndị ọrụ ohere ịjụ ajụjụ, nhọpụta akwụkwọ, na ịmụtakwu ozi banyere ọrụ gị. Na mgbakwunye, ịchọghị onye ọrụ ndụ dị ndụ 24/7 iji jikwaa ajụjụ! Teknụzụ anyị na-aza ha maka gị na mkparịta ụka, usoro mmiri mmiri.
Facebook ozi - tinye Botco.ai n'ime akaụntụ azụmaahịa Facebook gị dị ugbu a, na-enye ndị na-ege gị ntị ajụjụ ma nata azịza n'ime sekọnd.
Botco.ai Contextual Nkata Azụmaahịa
Botco.ai's Contextual Chat Marketing atụmatụ na-agbaso isi iyi nke ndị ọbịa na websaịtị nke ụlọ ọrụ, ibe Facebook, ma ọ bụ ọdịnaya mgbasa ozi ndị ọzọ, ma ọ bụ site na mgbasa ozi akwụ ụgwọ, mkpọsa ozi email, ma ọ bụ ụzọ okporo ụzọ ndị ọzọ. Njirimara ahụ na-enyere Botco.ai aka ịhazi mkparịta ụka ya na ndị ọbịa dabere na isi mmalite ozi ndị ahụ
Ihe Nlereanya: mgbasa ozi nke na - akpali ndị ọrụ itinye oge a ga - amalite mkparịta ụka banyere oge na ebe kachasị mma iji hazie ya, ebe mkpọsa na - akwalite otu ngwaahịa ga - enye ọdịnaya dị na ngwaahịa na uru ngwaahịa ahụ, na-ewepụta ahụmịhe mara mma ma ọ bụ nke ahaziri iche.
Site na ịhazi mkparịta ụka dabere na isi mmalite, ndị ahịa enweela ike ịbawanye nsonaazụ chọrọ na ọnụego ntụgharị gbanwere na nyocha A / B site na 103 pasent.
Botco.ai Nchịkọta Dashboard
Dashboard nyocha ahụ na-enye ndị ahịa ahịa ọhụụ zuru oke na ahụmịhe nkata niile site na ịchọpụta ajụjụ ndị na-emegharị oge, na-enye nghọta maka ebumnuche na omume onye ọrụ ọhụụ, yana nyocha arụmọrụ mkparịta ụka. The dashboard na-agbaji usoro ọ bụla n'ime ihe mgbaru ọsọ akọwapụtara ka ndị ahịa wee nwee ike nyochaa njem onye ọbịa ọ bụla.
Ndị na-ere ahịa na-enweta ọkwa nkọwa zuru oke nke na-enye ha ohere inyocha ma chọpụta ọnụọgụ nkwụsị na olulu ọ bụla na-aga nke ọma ma melite oyiri, usoro, na usoro ndị na-eduga na ntụgharị. Ihe ọmụma ndị a na-enyere ụlọ ọrụ aka ịme nke ọma, ịmatakwu ngwaahịa, ịre ahịa na mkpebi ndị ahịa.
Botco.ai na-ejikọkwa na ụlọ ọrụ CRM, email na sistemụ ahịa ndị ọzọ site na API ziri ezi ka o nwee ike iso ndị ọbịa nwee mkparịta ụka na mmekọrịta mbụ ha na ụlọ ọrụ, gụnyere akụkọ ihe mere eme ịzụta, ogologo mmekọrịta ha, ọnọdụ ndị otu, na ndị ọzọ. Ijikọta data si n'ofe njem ndị ahịa na-enyere Botco.ai aka ịnyefe ahụmịhe na nke ahaziri iche karịa nkata ọdịnala ọdịnala mgbe ị na-eme ka ntozu na usoro ahịa dịkwuo mma.
Dịka ọmụmaatụ, ndị na-ahụ maka ahụike, nwere ike ịnwe mkparịta ụka nkeonwe dabere na akụkọ ahụike nke onye ọrịa, ma na-emesi ha obi ike na ozi ọ bụla ha kesara n'oge ahụmịhe nkata ahụ nwere nnukwu nzuzo na nnabata HIPAA. Mkparịta ụka Botco.ai na Contextual na-eji ụzọ njirimara nzuzo-nchekwa na-adabereghị na njirimara ọ bụla, dabere na GDPR, CCPA, HIPAA, na iwu nzuzo metụtara ya.
Tags: botBotco.aiikorinkata botnnabatanlekọta ahụikeHIPAAhipaa-kwetamkpokọta nkata